पुस ८, २०७३ शुक्रवार १९:१०:००
डा. हरिहर शर्मा हाल अमेरिकास्थित न्यूयोर्कको कर्निङ सहरमा बस्छन् । उनी नेपालबाट अमेरिका जाने डाक्टरमध्ये सम्भवत पहिलो नै हुन् । सन् १९७१ मा उनी अमेरिका गएर बस्न थालेका हुन् । कर्निङको गथ्रीउ क्लिनिकमा कार्यरत उनी हालै नेपाल आएका थिए । उनीसँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले गरेको कुर...
कात्तिक २५, २०७३ बिहिवार २१:११:१४
डा. वीरेन्द्र भट्टराई अमेरिकाको लेकभ्यु इन्टर्नल मेडिसिन, फिजिसियन्स अफ सेन्ट्रल फ्लोरिडा प्राइमरी केयर एलायन्स मेडिकल ग्रुपको बोर्ड सदस्य तथा लगानी साझेदार हुन् । उनी लेक युस्टिस हेल्थ एन्ड रिह्याबका मेडिकल डाइरेक्टर समेत हुन् । इन्टर्नल मेडिसिन र जेरियाट्रिक मेडिसिनमा विशेषज्...
असोज १८, २०७३ मगलवार २३:५५:००
भदौ १७, २०७३ शुक्रवार २२:१८:००
खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि चिरपरिचित मुलुक हो । यहाँ थुप्रै नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यहाँ श्रमिकदेखि लिएर प्रविधिको क्षेत्रमा उच्च तहमा समेत नेपालीहरु कार्यरत छन् । पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च जनशक्ति पनि पुग...
बिरामीलाई कुरा बुझाउन नसक्दा पनि डाक्टरलाई कारबाही
भदौ १६, २०७३ बिहिवार २२:१५:००
म अहिले अमेरिकाको डेलाभरस्थित नाइन्टकोक मेमोरियल कम्युनिटी हस्पिटलमा कार्यरत छु । इन्सिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (आईओएम)बाट एमबिबिएस गरेपछि दुई वर्ष पाटन हस्पिटल मेडिकल अफिसरका रुपमा सेवा दिएको थिएँ । त्यसपछि विशेषज्ञ तहको अध्ययनका लागि अमेरिका आइपुगेको हुँ । एक वर्ष अ...
अमेरिकामा नेपाली डाक्टर अब्बल
साउन १७, २०७३ सोमवार २२:२२:००
शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जबाट एमबिबिएस गरेपछि डा. प्रभात अधिकारीले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा इन्टरनल मेडिसिनमा एमडी गरे । साढे दुई वर्ष अमेरिकामै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेपछि अहिले इन्फेक्सियस डिजिजमा फेलोसिप गरिरहेका छन् । यसका साथै आस्क फाउन्डेसनमार्फत सम...
यस्तो छ बेलायती स्वास्थ्य प्रणाली
बैशाख १९, २०७३ आइतवार २२:२६:००
- डा. अरुण झा, पूर्व अध्यक्ष, नेप्लिज डाक्टर्स एसोसिएसन युके बेलायतमा हरेक व्यक्तिको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा जिपी (जनरल प्राक्टिस) डाक्टरसग रजिस्टर्ड हुन्छ । ग्रामीण होस् या सहरी भेग, दुई हजार जनताका लागि एउटा जिपी तोकिएको हुन्छ । बेलायतमा रहने जो कोही आफ्नो नजिकको...
इन्टर्नल मेडिसिन हेल्थ सिस्टमको ब्याकबोन
असोज १०, २०७१ शुक्रवार १८:४७:२१
भक्तपुरमा जन्मिएकी ज्योति प्रधानाङ्गले काठमाडौंस्थित नेपाल मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस पूरा गरिन् र एमडी अध्ययन गर्न अमेरिका पुगिन् । उनले अमेरिकाको हवाईस्थित मायावी मेडिकल कलेजबाट इन्टर्नल मेडिसिनमा एमडी गरिन् । अध्ययनका क्रममा उनले नेपाली तथा अमेरिकी उपचार पद्धतिमा धेरै ...
आइसियु नेपाली बिरामीले धान्न सक्दैनन्
भदौ १७, २०७१ मगलवार १८:५८:५०
त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सन् २००३ मा एमबिबिएस सकेका डा. विजय श्रेष्ठले सन् २००७ मा बेलायतबाट अर्थोसर्जरी सकेका हुन् । त्यसपछि अमेरिका गएका उनले इन्टर्नल मेडिसिनमा एमडी अध्ययन गरे । हालैमात्र अमेरिकाको वेकफरेस्ट स्कूल अफ मेडिसिनबाट पल्मोनोलोजी (फोक्सोरोग विशेषज्ञ) र आइसियु...
सूचना विज्ञानको सुविधासम्पन्न प्रणाली चाहिन्छ
भदौ १६, २०७१ सोमवार १८:५४:३१
काठमाडौंमा जन्मिएर विराटनगरमा बाल्यकाल बिताएका सञ्जीव सापकोटाले बुढानिलकण्ठ स्कुलमा पढे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बाट एमबिबिएस पास गरे । त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको जेनेभास्थित कार्यालय अवसर पाएपछि दुई वर्ष उतै बसे । फिनल्याण्डबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर...
नेपालमा युनिभर्सल हेल्थ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ
जेठ १२, २०७१ सोमवार १९:०३:२०
तपाईं लामो समयदेखि अमेरिकामा बसेर काम गरिरहनु भएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्य सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष के छ जस्तो लाग्छ ? अधिकांश अमेरिकी नागरिकको स्वास्थ्य विमा छ । विमा भएको व्यक्तिले सजिलै डाक्टर भेट्न वा ल्याब टेष्ट गर्न सक्छन् । शल्यक्रिया नै गराउनु परे पनि अप्ठेरो...
नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति सक्षम
बैशाख ३१, २०७१ बुधवार १८:०८:०४
नेपाल र अमेरिकामा काम गर्दा कस्तो फरक पाउनु भयो ? नेपाल एकदमै सोसियोकल्चर सोसाइटी हो । तर, अमेरिका व्यक्तिकेन्द्रित समाज भएकाले काम गर्ने वातावरण पनि फरक हुन्छ । नेपालमा काम गर्ने भनेको कार्यालय समयमा मात्र हो, कसैको पनि तनाव हुँदैन । आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म...
अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा
बैशाख ३, २०७१ बुधवार १८:१७:३८
अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवाका मजबुत र कमजोर पक्ष के–के हुन् ? अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवाले जहिले पनि तथ्यपरक औषधोपचार र सामूहिकतामा आधारित सेवामा जोड दिन्छ । यसरी सेवा प्रदान गर्दा कहिल्यै पनि एकजना डाक्टरको निर्णय हाबी हु“दैन । हरेक निर्णय सेवाको निर्द...
फिजिसियनले रिफर गरेपछि मात्र विशेषज्ञले हेर्नुपर्छ
चैत २८, २०७० शुक्रवार १८:२०:१६
नेपाल र ओस्लोमा काम गर्दा कस्तो फरक पाउनु भएको छ ? सन् १९९९ मा एमबीबीएस सकेपछि म नर्वे पुगेको हुँ । तर, नेपालमा पनि मैले केही समय काम गरेँ । नर्वे र नेपालको स्वास्थ्य सेवामा धेरै फरक छ । नर्वेको स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यर्होछ । अर्थात् कसैले पनि पैसा न...
‘हामि बिरामीलाई सम्मान गर्छौं’
चैत २३, २०७० आइतवार १८:२३:१६
नेपाल र अस्ट्रेलियामा काम गर्दाको फरक कस्तो छ ? १० वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा प्राक्टिस गरिरहेको छु । नेपालमा रहँदा मैले पाटन अस्पतालमा अन्तिम सेवा गरें । अस्ट्रेलियामा स्वास्थ्य जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया निकै फरक छ । नेपालमा सरकारी सेवाको कुरा गर्ने हो भने प...
बिरामी र डाक्टरबीच राम्रो सम्बन्धले उपचार
चैत १२, २०७० बुधवार १८:२९:१०
बेलायत र नेपालको स्वास्थ्य सेवामा भिन्नता कस्तो छ ? बेलायतमा स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सरकारले नै गर्छ । उपचार खर्च निःशुल्क छ । त्यसैले बिरामीलाई पैसाको तनाव रहेन । बेलायतमा दीर्घरोगहरूमा उपचारका लागि पालो नपाएर बिरामीले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ...
नेपालको उपचार प्रणाली नै गलत छ
फागुन १४, २०७० बुधवार १७:४५:४४
जर्मनी र नेपालमा मुटुको उपचारमा के फरक पाउनुभयो ? उपचारको कुरा हेर्ने हो भने नेपाल र जर्मनीमा धेरै कुरा फरक छन् । मुटुको मात्र नभई समग्र उपचार प्रणाली नै फरक छ । जर्मनीमा नयाँ प्रविधिदेखि लिएर उपचार पद्दति पनि चुस्त र आधुनिक छ । नेपालमा विस्तारै सेवा विस्तार हुँ...
आइसियुका लागि चुस्त टिम चाहिन्छ
माघ १२, २०७० आइतवार १७:५४:३९
आइसियू सेवा कस्तो हुनुपर्छ ? गुणस्तरीय आइसियु सेवाका लागि मल्टिडिसिप्लिनरी (बहुविधा) संबन्धित रोगका विशेषज्ञ डाक्टर, तालिमप्राप्त क्रिटिकल केयर नर्स, रेस्पेरोटरी थेरापिष्ट, फर्मासिस्ट, डाइटिसियनलगायतको मल्टिडिसिप्लिनरी टिम चाहिन्छ । यो आफैंमा निकै खर्चालु सेवा हो...
स्वास्थ्यमा विमा अपरिहार्य - डा. विशाल ज्ञवाली
मंसिर २४, २०७० सोमवार १८:०५:१६
नेपाल र जापानको स्वास्थ्य सेवामा के—कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ? यी दुई देशबीच धेरै नै भिन्नता छ । जापानको स्वास्थ्य सेवाको मुख्य विशेषता स्वास्थ्य विमा हो । जापान सरकारले सबै व्यक्तिका लागि विमाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नै यो कार्यक्रम चलाएकाले यहाँका जनतालाई स्...
स्वास्थ्य सेवामा सबल बन्दै नेपाल
मंसिर २४, २०७० सोमवार १७:५९:३६
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई विश्वको स्वास्थ्य परिवर्तनसँग तुलना गर्दा कस्तो पाउनु भएको छ ? नेपालको स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्क एकदम नै न्यून छ । नेपाल प्रविधिका हिसाबले पछि परे पनि उत्कृष्ठ डाक्टरहरु छन् । नेपालमा पहिले नयाँ प्रविधि भित्रिन पनि समय लाग्थ्यो । तर अहिल...